फायरस्टिक (नोभेम्बर २०२०) को लागी सर्वश्रेष्ठ VPN - सुपर फास्ट एण्ड सिक्यर्ड - कसरी
भर्चुअल निजी नेटवर्क (VPN) आजको डिजिटल युगमा ठूलो मान्यता प्राप्त गरेको छ। यो तपाईको डेटा र नेटवर्क सुरक्षा गर्न एक उत्तम तरिका हो जब इन्टरनेट ब्राउज गर्दै। स्ट्रिमिंग सेवा प्रदायकहरू जस्तै अमेजनले तपाईंलाई फायरस्ट्रिक, फायर क्यूब, र अन्य समान उपकरणहरू ल्याउँछन्। यसले तपाईंलाई कुनै पनि टिभीलाई HDMI पोर्टसँग मनोरन्जनको बक्समा बदल्नको लागि सक्षम गर्दछ।
यद्यपि तपाई अझै ह्याक हुने खतरामा हुनुहुन्छ। VPN प्रदायकहरूले विशेष रूपमा फायरस्टिकको लागि उत्तम VPN प्रस्तावमा लगानी गरेका छन्। यी VPN प्लेटफार्महरू तपाईको फायरस्टिकसँग उपयुक्त छन् र तपाईलाई सुरक्षित ब्राउजि le फुर्सतमा ल्याउँछन्।
VPN को लागी असंख्य विकल्पहरु छन्। तपाईंले उनीहरूको लागि सित्तैमा झर्नु हुँदैन किनभने उनीहरूसँग सामान्यतया सीमित प्रदर्शन वा पहुँच छ। यसबाहेक, तिनीहरू अझै पनि सम्भावित खतराहरूको जोखिम चलाउन सक्छन्। यो एक प्रीमियम VPN को लागी एक राम्रो विचार हो। तसर्थ, हामी तपाईलाई फायरस्टिकका लागि उत्तम VPN को सूचीमा ल्याउँदैछौं:
एक्सप्रेसभीपीएन कालो शुक्रवार २०२०
नेटफ्लिक्सको लागि Best सर्वश्रेष्ठ VPN
फायरस्टिकका लागि सर्वश्रेष्ठ VPN - स्थापना गर्न सजिलो (२ मिन्स।)
जडान:एक पटकमा ice उपकरण
उत्तम सुविधा:किल स्विच
एक्सप्रेस VPN ले तपाईलाई असीमित ब्यान्डविथ ल्याउँदछ एक मजबूत VPN 160 भन्दा बढी स्थानहरुमा पहुँचको लागि। यो सर्वव्यापी अनुकूल छ र बिभिन्न प्लेटफार्महरूका लागि अनुप्रयोगहरू छन्। तपाईं यसलाई फायरस्टिक्स, प्लेस्टेशन, Xbox, र कुनै पनि अन्य उपकरणमा स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। ब्राउजरहरूको लागि तपाई एक्स्टेन्सन उपलब्ध हुनुहुनेछ। तपाईं नेटफ्लिक्स, कोडी, र सबै अन्य स्ट्रिमिंग प्लेटफर्महरूमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुन्छ।
यो एक वर्ल्ड-क्लास र अत्यधिक विश्वसनीय VPN हो जुन तपाईंलाई वस्तुतः हरेक सामग्री अनलाइन पहुँच गर्दछ। सब भन्दा उल्लेखनीय सुविधा केल स्विच हो कि तपाइँको नेटवर्क संग कुनै छेड़छाड़ रोक्छ। थप रूपमा, तपाईं लुकाउन सक्नुहुनेको लागि म स्पि tunलि tun टनेलि get पाउन सक्दछु। समग्रमा, यो एक राम्रो-सजग VPN विकल्प हो।
प्रयोगकर्ता मैत्री र सेटअप गर्न सजिलो
विश्वव्यापी स्तर अनुकूलता
एक पटकमा एक प्लेटफर्ममा प्रयोगको लागि उपयुक्त
जडान:एक समय मा7उपकरण
उत्तम सुविधा:सार्वजनिक वाइफाइ समर्थन
साइबर गोस्ट अर्को VPN हो जुन फास्टस्टिक्सका लागि उत्तम VPN को सूचीमा खडा हुन्छ। यो त्रुटिपूर्ण जडान को लागी एक उल्लेखनीय ,,4०० सर्भर नेटवर्क छ। तपाईं कुनै पनि समयमा devices उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ। एक युगमा जहाँ वाइफाइ अक्सिजन जत्तिकै प्रचलित छ, तपाईंसँग एक VPN छ जसले यसलाई सुरक्षा गर्दछ।
गेमि con कन्सोलहरूको लागि, यसले PS र Xbox सँग काम गर्दछ। यसले आईओएस, एन्ड्रोइड, म्याक, र विन्डोज समर्थन गर्दछ। यद्यपि यो दुई ब्राउजरहरू क्रोम र फायरफक्ससँग उपयुक्त छ। यस बाहेक, यसले तपाईंको सुरक्षा बढाउने कुनै लगहरू राख्दैन।
असाधारण कनेक्टिविटी र ब्यान्डविथ
कुनै नेटवर्क, निजी वा सार्वजनिक को लागी काम गर्दछ
प्रयोगकर्ताहरूका लागि सँधै अफरको केही फारम हुन्छ
सबै ब्राउजरहरू र उपकरणहरूसँग पूर्ण रूपले उपयुक्त छैन, तर काम गर्दछ।
SurfShark ले तपाईलाई VPN विकल्प ल्याउँछ जुन सूचीमा अन्य भन्दा सस्तो छ। यो countries 63 देशहरूमा उपलब्ध छ १ 1,०० भन्दा बढी सर्भरहरूको साथ। यद्यपि सबै भन्दा उल्लेखनीय सुविधा उपकरणहरूको लागि असीमित कनेक्टिविटी हो। यो सहि छ, र तपाईं थप उपकरणहरू बिना तपाईंको मनपर्ने थुप्रै उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक्लै शार्पभिएपएनलाई त्यहाँ बाहिर एक उत्तमको रूपमा राख्छ। सुरक्षाको लागि, तपाइँ सैन्य-ग्रेड र ईन्क्रिप्शन एकीकरण प्राप्त गर्नुहोस्। अरु के छ त? तपाईंसँग व्हाइटलिस्टको विकल्प छ जसले तपाईंलाई VPN मार्फत निश्चित अनुप्रयोगहरूलाई अनुमति दिन सक्षम गर्दछ। अर्को शब्दहरूमा, तपाईले आफ्नो उपकरण भित्र निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कुन अनुप्रयोगहरूले VPN प्रयोग गर्दछ।
अनुकूलन को लागी श्वेतसूची
असीमित उपकरण कनेक्टिविटी
अन्य VPNs भन्दा बढी किफायती
नेटफ्लिक्स र अन्य स्ट्रिमि libra पुस्तकालयहरूमा सीमित (१))
उत्तम सुविधा:ईन्क्रिप्टेड भण्डारण ब्याकअप
आईपीभीनिससँग एउटा चीज छ जुन यसलाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरूको भन्दा अगाडि राख्छ। यो तपाईलाई as० दिनको नि: शुल्क प्रयोगको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यसैले, तपाइँ यसलाई पहिले चाहिन्छ कि तपाइँ यसलाई चाहिन्छ वा छैन भनेर निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। असीमित कनेक्टिविटीको साथ, यो क्रस-प्लेटफर्म प्रदर्शनको साथ तपाईंसँग भएको कुनै पनि उपकरण डाउनलोड र प्रयोग गर्न स्वतन्त्र हुन्छ।
क्लाउड भण्डारणको विश्वमा, यो तपाईंको फाईलहरूको लागि २GB० जीबी ईन्क्रिप्टेड भण्डारण ब्याकअपको साथ आउँदछ। यसैले तपाईसँग अतिरिक्त सुरक्षा छ। समग्रमा, आईपी विनिष्टले तपाईंको गतिलाई असर नगरी एक उल्लेखनीय VPN को रूपमा प्रदर्शन गर्दछ। यसले तपाईलाई निर्बाध कनेक्टिविटी ल्याउँछ।
२ GB० जीबी ईन्क्रिप्टेड स्टोर
असीमित उपकरण डाउनलोड र प्रयोग गर्नुहोस्
Day० दिन नि: शुल्क परीक्षण
अत्यधिक सस्तो प्याकेजहरू
सूचीमा अन्य भन्दा कम सर्भरहरू
Private. निजी इन्टर्नेट पहुँच
जडान:एक समयमा १० उपकरणहरू
उत्तम सुविधा:बहु VPN गेटवे
यदि तपाईं बिभिन्न प्रकार्यहरू र सुविधाहरू बुझ्ने हलचलमा जान चाहनुहुन्न भने, निजी इन्टर्नेट पहुँचले तपाईंलाई सीधा VPN सेवा ल्याउँछ। यससँग अनमेटेड जडानहरूसँग १२,००० भन्दा बढी सर्भरहरूको विस्तृत नेटवर्क छ।
तपाईं यसलाई अज्ञातको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र १० उपकरणहरू जडान गर्नुहोस्। यसले प्रमुख प्लेटफार्महरूसँग काम गर्दछ तर सार्वभौमिक उपकरण कम्प्याटिबिलिटी छैन। तपाईं प्रतिबन्धित सामग्री र सबै कुरा पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। यसको प्रयोगकर्ता-मैत्री इंटरफेसले यसलाई यसको प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणसँग बाहिर खडा गर्दछ।
तत्काल सेटअप, प्रयोग गर्न सजिलो
सर्भर को व्यापक उपलब्धता
थप केहि प्रस्ताव गर्दैन
R. मजबूत VPN
अनुकूलता:क्लाउडको साथ युनिभर्सल
जडान:एक समयमा १२ उपकरणहरू
उत्तम सुविधा:WireGuard संरक्षण
कडा VPN एक उचित लचिलो VPN हो कि क्लाउड र उपकरणहरू सहित हरेक प्लेटफर्मको लागि उपलब्ध छ, तपाईंले कम VPN अपेक्षा गर्नुहुने। यो एक्लोपनले यसलाई उपलब्धताको अभाव र सूचीमा सर्भरहरूको कम देखिने संख्याको बावजुद बाहिर खडा गर्दछ।
StrongVPN को बारेमा राम्रो पक्ष भनेको यो WireGuard संग साझेदारी गरिएको छ, त्यसैले तपाईंसँग तिनीहरूको सेवाहरू, सुरक्षा, र विकल्पहरूमा पनि पहुँच छ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, यो लाग्दछ कि बलियो VPN ले लगातार अरू प्लेटफर्महरूसँग साझेदारी गर्दै तपाइँलाई थप अवसरहरू ल्याउँदछ। यो ईन्क्रिप्टेड भण्डारण एकाईको २ 250० जीबीको साथ आउँछ।
यो सेट अप गर्न र प्रयोग गर्न सजिलो छ। तपाईं सूचीमा अन्य VPNs जस्तै उस्तै विकल्पहरू पाउनुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाई विस्तारको सम्भावनाको साथ सस्तो VPN खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो सही विकल्प हो।
२ GB० जीबी ईन्क्रिप्टेड भण्डारण
प्रत्येक प्लेटफार्म र उपकरण संग संगत
सर्भरहरूको संख्या कम र कम देशहरू
जडान:एक समयमा6उपकरणहरू
उत्तम सुविधा:अल्ट्राफास्ट गति
VPN हरू तपाईको इन्टरनेटको गतिमा टोल लिन्छन् जुन तपाईले रोज्नु भएको प्रकारको पर्वाह नगरी। NordVPN त्रुटिहीन गति र कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नका लागि परिचित छ र तपाईंको उपकरण, इन्टरनेट जडान, र अपरेटिंग प्रणालीको साथ उच्च अनुकूलता। यसैले, यो एक पूर्ण विकसित र मजबूत VPN सेवा प्रदायक हो।
NordVPN कालो फ्राइडे -% 83% अफ (आश्चर्यजनक सौदा)
यदि तपाईं एक VPN मा अचल सुरक्षा खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो एकसँग मालवेयर सुरक्षा, ईन्क्रिप्ट्स, र अधिक छ। समग्रमा, यो एक प्रीमियम-ग्रेड VPN हो, जुन यो यसको दोष पनि हो। तुलनात्मक रूपमा, यो VPNs को लागि स्पेक्ट्रम को महँगो अन्त मा छ।
प्रदर्शनमा केन्द्रित सुविधाहरूको पूर्ण
गतिलाई प्रभाव पार्दैन र निर्बाध सेवाहरू ल्याउँछ
बजारमा उपलब्ध अन्य VPN विकल्पहरू भन्दा बढि मूल्यवान
Private. निजी VPN
उत्तम सुविधा:द्रुत सेटअप
यो अझै बजारमा एक 'युवा' वा 'नयाँ' VPN हो जुन यसको अपवादात्मक सेवाहरूको कारण स्थिरतामा लोकप्रिय छ। एक निजी VPN ले तपाईलाई VPN ले गर्नुपर्ने सबै कुरा ल्याउँदछ। तपाईं आफ्नो फायरस्टिक वा फायरक्यूबको साथ क्षेत्रीय ब्लकलाई बाइपास गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, तपाईं प्रतिबन्ध अनलक गर्ने क्षमताको साथ अधिकतम गति पाउनुहुनेछ।
यो अप गर्न छिटो छ र अपरेटिंग प्रणाली को सबै प्रकार को समर्थन गर्दछ। यद्यपि यो अझै बढ्दै छ, यो विश्वव्यापी रूपमा उपयुक्त छैन। त्यहाँ केहि उपकरणहरू छन् जुन यसमा सुस्त छ। त्यस्तै गरी, यसले केहि चिनियाँ फायरवालहरू बाइपास गर्न सक्दैन, तर यो एक बढ्दो VPN हो र भविष्यमा धेरै फाइदाहरू देखाउँदछ।
Seconds० सेकेन्ड भित्र सेट अप गर्न सजिलो
नयाँ VPN जुन विकासमा लचिलो छ
फायरस्टिक र अन्य मानक प्लेटफर्महरूसँग उपयुक्त
विश्वव्यापी अनुकूलता छैन
सर्भरहरूको अभाव छ, र यो अझै एक बढ्दो प्लेटफर्म हो
उत्तम सुविधा:महान ग्राहक सेवा
UltraVPN सबै कुरा हो जुन तपाइँ VPN हुन आशा गर्नुहुन्छ। तपाईंसँग फायरस्टिक सहित प्रत्येक प्लेटफर्मको साथ अनुकूलता छ। यसले तपाईंलाई स्थान अनलक गर्न र विश्वभरि कतैबाट पनि सामग्री पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंसँग पूर्ण बेनामी र ह्याकहरू र सम्भावित निगरानी विरुद्ध संरक्षण छ।
यसले तपाईलाई of महिनासम्म निःशुल्क VPN सुरक्षा र days० दिनसम्म पैसा फिर्ता ग्यारेन्टीको साथ सेवाहरूको दायरा ल्याउँदछ। के UltraVPN साँच्चै अलग खडा बनाउँछ? यो उल्लेखनीय ग्राहक सेवा र लचकता हो। यदि तपाईंले गलत योजना छनौट गर्नुभयो वा VPN मा समस्या भयो भने, तिनीहरूको ग्राहक सेवाले तुरून्त समाधान प्रदान गर्दछ।
१०० भन्दा बढी देशहरू र १००० सर्भरहरू
प्रशंसनीय ग्राहक समर्थन
लचिलो प्रस्ताव र सुविधाहरू
पूर्ण विकसित VPN सेवा
अरू केहि बढि प्रस्ताव गर्दैन VPN हरू टेबलमा ल्याउनका लागि परिचित छन्
१०. हटस्पट शिल्ड
उत्तम सुविधा:बलियो विश्वसनीयता
हटस्पट शिल्ड शायद सूचीमा सबैभन्दा सिधा VPN हो। यो अत्यधिक व्यावहारिक र लागत-प्रभावी छ, VPN का लागि डिजाइन गरिएका सेवाहरूको दायराको साथ। तपाईं एक पटकमा devices उपकरणहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ। हटस्पट शिल्ड मनोरञ्जन मिडियामा अविश्वसनीय रूपमा प्रख्यात भएको छ, भिडियो स्ट्रिम गर्नदेखि खेल खेल्न।
यो एक न्यूनतम डिजाइन छ र कुनै पनि तरिका मा घुसपैठकारी साबित गर्दैन। तपाईंसँग फायरस्टिक पहुँचको साथ मानक प्लेटफर्म अनुकूलता छ। समग्रमा, यो सस्तो दरमा राम्रो VPN को लागी उत्तम विकल्प हो।
सबै VPNs को सस्तो
गेमि and र मनोरन्जनका लागि उत्कृष्ट
यो एक मानक प्रीमियम - VPN हो
एक VPN को उपयोग को लाभ:
एक VPN एक ह्याकि tool उपकरण हैन। यो एक कानूनी उपकरण हो कि तपाईंसँग तपाईंको पहिचान सुरक्षित राख्न र तपाईंको डाटा सुरक्षित गर्न प्रयोग गर्न अधिकार छ। विश्वभरि सबै सरकारले प्रयोगकर्ताहरू र पुजारीहरूमा आफ्ना गतिविधिहरूमा निगरानी राख्छन्।
अनुकूल VPN एकीकृत गरेर, तपाइँ यो हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ। फायरस्टिकसँग VPN प्रयोग गर्ने केहि अन्य फाइदाहरू छन्।
१. तपाईको डेटा र पहिचानलाई सुरक्षित गर्नुहोस्
अमेजन एक अनलाइन शपिंग प्लेटफर्म, संगीत, र भिडियो स्ट्रिमि services सेवाहरूको साथ अन्य विस्तारहरूमा एक विस्तार नेटवर्क हो। तपाई प्राय जसो तपाईको डेटालाई अमेजनको साथ भुक्तान, ठेगाना र अतिरिक्त व्यक्तिगत जानकारी सम्बन्धी भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ।
VPN प्रयोग गरेर, तपाईं आफ्नो डाटा गलत हातहरूमा पर्नबाट रोक्नुहुन्छ। तपाईंको पहिचान सुरक्षित रहन्छ, र तपाईं आफ्नो स्ट्रिमिंग र कुनै चिन्ता बिना ब्राउजिंग को बारे मा जान सक्नुहुन्छ।
२. ब्लक गरिएको सामग्री पहुँच गर्नुहोस्
यसको लोकप्रियताको बावजुद, त्यहाँ फायरस्ट्रिक, फायर क्यूब, वा अन्य कुनै समान स्ट्रिमि device यन्त्रको स्वामित्व लिनमा ठूलो त्रुटि रहेको छ। यी सबै क्षेत्र मार्फत प्रतिबन्धित छन्। तसर्थ, तपाईं आफ्नो क्षेत्रमा सीमित सामग्रीमा पहुँच गर्न सक्नुहुन्न।
यो अनुचित देखिन्छ किनकि तपाईं यी उपकरणहरूमा उपलब्ध लगभग हरेक प्रकारको सामग्रीको लागि भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ। एक VPN सजिलै समस्या बाट बचाउन सक्नुहुन्छ र अवरुद्ध सामग्री को पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
जबकि ती दुबै तपाईको फायरस्टिकका लागि विशिष्ट छन्, त्यहाँ साधारणतया VPN स्वामित्व राख्नु असंख्य लाभहरू छन्। तपाईंको आईपी ठेगाना, जडान, र डाटा को सुरक्षा देखि पीछा, prying, र अन्य समान कार्यहरूको रोकथाम गर्न, एक VPN एक अमूल्य सम्पत्ति साबित। यदि तपाईंले सामग्री ब्लक गर्नु भएको छ, वा प्लेटफर्म जस्तै यूट्यूब, विशेष खेलहरू वा वेबसाइटहरू, तपाईं VPN मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
त्यहाँ तपाईंसँग यो सूची होफायरस्टिकका लागि उत्तम VPN।सब भन्दा उल्लेखनीय कारक यो हो कि यी VPNs को प्रत्येक एक महान सुविधाहरू र प्रयोगकर्ताहरूको लागि असाधारण सुरक्षाको साथ आउँछ।
यी प्रत्येक एक संग, तपाईंसँग बहु उपकरण पहुँच छ। लगभग सबैको days० दिन मनी फिर्ता ग्यारेन्टी छ, केहि बढि र केहि कम। समग्रमा, यी अत्यधिक सुरक्षाका साथ हामीले तपाईंको असीमित स्ट्रिमि !को लागि फेला पार्न सक्दछौं! यी मध्ये कुनै पनि प्राप्त गर्नुहोस् र रमाउनुहोस्!
नि: शुल्क फिल्म स्ट्रिमिंग साइटहरू (२०२०) साइन अप बिना नै
कसरी एयरपडहरू आईफोनसँग जोड्दै फिक्स गर्ने?
शीर्ष १० निःशुल्क फिल्म साइटहरू
कसरी नेटफ्लिक्स को सदस्यता लिन
कसरी लुक्स प्राप्त गर्ने
कसरी उच्च निःशुल्क फिल्म डाउनलोड
कुनै पनि गीत नि: शुल्क सुन्नुहोस्
xbox प्रत्यक्ष गोल्ड कोड जनरेटर नि: शुल्क डाउनलोड कुनै सर्वेक्षण
अमेजन सिक्का उपहार दाबी कोड